के म राम्री छु र ? : माेडल निरन्जली लामा | SaraKhabar.com
के म राम्री छु र ? : माेडल निरन्जली लामा
काठमाडाैँ । सेलो म्युजिक भिडियोमा नयाँ अनुहारका रुपमा देखा परेका निरन्जली लामा अहिले सबैको नजरमा पर्न सफल भएकी छिन् ।
यही कार्तिक ९ गते ङाला लिला गुङरी च्यागो यूट्युबमा सार्वजनिक हुँदैछ। बिहिन लामा र जितु लोप्चनको स्वर रहेको उक्त म्युजिक भिडियोमा मोडल निरन्जली लामा र नव मोडल हेमन्त लामाले अभिनय गरेका छन् । छोर्वाला काई गेताङको यो पहिलो म्युजिक भिडियो हो ।
गायक शेखर तामाङको “सान्नानी किन हो किन?” म्युजिक भिडियोबाट डेब्यु गरेकी उनीले चर्चित गायक राजु लामाको “घर मेरो पुर्व” म्युजिक भिडियोबाट चर्चा कमाएकी हुन् । त्यसपछि भने निरञ्जलीले आजसम्म पछि फर्केर हेर्नु परेकोे छैन ।
छोटो समयमा सबैको नजरमा पर्न सफल मोडल निरन्जली लामासँग सारा खबरले छोटो संवाद गरेको थियो । संवादका क्रममा उनले आफू सिंगल नै रहेको बताएकी छिन् ।
सेलो म्युजिक भिडियोमा उदाउने र अस्ताउनेहरुको यहाँ कुनै गन्ती नै छैन तर मोडल निरन्जली लामा भने मासिक कम्तिमा ४ वटा म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहने गरेकी छिन् ।
''जुन पायो त्यही गीतमा अभिनय गर्ने हो भने मैले महिनामा १० वटा म्युजिक भिडियोहरुमा अभिनय गर्न सक्छु तर म म्युजिक भिडियो छानेर मात्र खेल्ने गर्छु त्यसैले महिनाको ४, ५ वटा मात्र हुन्छ'' संवादको क्रममा उनीले बताइन् ।
अहिले उनी बौद्धमा बुटिक संचालनको तयारीमा छिन् । मोडलिङबाट जीवन जिउन गाह्रो भयो ? भन्ने प्रश्नमा उनी हाँस्दै भन्छिन् “होइन, बरु मोडलिङबाट कमाएको पैसालाई सदुपयोग गर्नका लागि चाहिंँ बुटिक खोलेको हो ।” उनीले हाँस्दै प्रश्नको उत्तर दिईन् ।
हुन त मोडल निरन्जली लामाले खेलेको कुनै पनि म्युजिक भिडियो असफल भएको छैन ।
संवादकै क्रममा उनीले बताइन् “मलाई फिल्म खेल्नका लागि अफर नआएको होइन तर म फिल्म खेल्दिन , म म्युजिक भिडियोमा निर्देशकको रुपमा काम गर्न चाहन्छु । यो मेरो पहिलादेखिको सपना पनि हो ।”
करिब डेढ वर्षको अन्तरालमा दुई सय भन्दा धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी निरन्जली लामा तामाङ गीत, संगितको क्षेत्रमा मात्र हाेइन आम नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा नै प्रबल सम्भावना बाेकेकी माेडल हुन् ।
यत्ति धेरै राम्री हुनुकाे कारण के हाेला ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा हांँस्दै प्रतिप्रश्न गर्छिन्, ' के म राम्री छु र ?' बाँकी के के कुरा भए जान्न भिडियाे हेर्नु हाेला ।